MX -21 Beta 2: MX Linux 21 ၏ဗားရှင်းအသစ် - Flor Silvestre | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | 07/09/2021 06:00 | ဖြန့်ဝေ, NOTICIAS
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့ထံမှသတင်းကောင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် DistroWatch တွင်“ အဆင့်အမြင့်ဆုံး GNU / Linux Distro" ၎င်းကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသောသုံးစွဲသူများမှ ဤသည် မှလွဲ၍ အခြားမရှိပါ "MX Linux"မရ။ ၎င်းသည်၎င်း၏နောက်ဗားရှင်း၏ဒုတိယ beta ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ "MX-21 Beta 2" ၎င်းကို၎င်း၏ပုံမှန်အသုံးပြုသူများနှင့်၎င်းကိုစိတ်ဝင်စားသူအားလုံးအားစမ်းသပ်ခံရလိမ့်မည်။
En "MX-21 Beta 2" ငါတို့မြင်ရမယ့်အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးထဲကမှ ISO တွေရနိုင်ပါတယ် 32 နှင့် 64 Bit နှင့် XFCE နှင့် Plasma Desktop ပတ်ဝန်းကျင်, အ FluxBox Window Manager.
စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်မည်သည့်သတင်းကိုသုံးသပ်မည်နည်း MX-21 Beta 1 ISO ဖြစ်သည်ငါတို့ရဲ့လင့်ခ်အောက်ကငါတို့ချက်ချင်းထွက်သွားလိမ့်မယ် ယခင်ဆက်စပ် post ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ကိုပြီးအောင်သူတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူရယူနိုင်ကြတယ်။
"လွန်ခဲ့သော ၄ ရက် (၀၈/၂၃/၂၀၂၁)၊ "MX" ဟုလူသိများသည့် GNU/Linux Distribution ၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်အောက်ပါ MX Linux Distro ၏ပထမဆုံး beta ဗားရှင်းရရှိနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားကြိုဆိုခြင်းနှင့်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောသတင်း အခမဲ့၊ ဆိုလိုသည်မှာ“ MX-4” ဖြစ်သည်။ Debian GNU / Linux အဖွဲ့ကကြေငြာပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာ "MX" ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကွယ်မှထက်မြက်သောအဖွဲ့က၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိစေသည်။ ဤ ၈/၁၄/၂၀၂၁ သည်တူတူထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲဖြစ်သည်။" MX -21: MX Linux beta 1 ဗားရှင်းရနိုင်သည် - Flor Silvestre / Wildflower
1 MX-21 Beta 2: ယခုစမ်းသပ်နိုင်ပြီ
1.1 MX-21 Beta2တွင်သတင်းများ
1.1.1 ¿ Que မြက်ပင်က de Nuevo?
MX-21 Beta 2: ယခုစမ်းသပ်နိုင်ပြီ
MX-21 Beta2တွင်သတင်းများ
အဆိုပါအညီ မကြာသေးမီကထုတ်ဝေ ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ MX Linux ၎င်းသည် ISO အသစ်များတွင်ပါ ၀ င်သည် "MX-21 Beta 2":
¿ Que မြက်ပင်က de Nuevo?
installer partition အသစ်တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်းဧရိယာ၊ lvm volume ရှိလျှင် lvm အထောက်အပံ့အချို့ပါ ၀ င်သည်။
UEFI Live Boot Menus အသစ်များသည်ယခင် console menus များအစား boot menu နှင့် submenus များမှအမျိုးမျိုးသော live boot ရွေးချယ်မှုများ (စွဲမြဲစွာစသည်) ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။
XFCE 4.16 နှင့် Plasma 5.20 Desktop ပတ်ဝန်းကျင်များ၊ mx-fluxbox 1.3.7 တွင် configurations များနှင့် Fluxbox 3.0 Windows manager အပြင် Fluxbox XNUMX Windows manager တို့ပါ ၀ င်သည်။
ပုံမှန်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများအတွက်သုံးစွဲသူစကားဝှက် (sudo)၊ အောက်ပါ configuration option တွင်ပြောင်းလဲနိုင်သော MX-Tweak + အခြား tab များ။
installer တစ်ခုနှင့် live system ကိုနောက်ဆုံးဗားရှင်းများသို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
ယခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှမီနူးများသည်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက် rollback options ကဲ့သို့အထူးအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ပက်ကေ့စ်များသို့ mesa vulkan ယာဉ်မောင်းများထည့်သွင်းပါ။
"mx-comfort" ဆောင်ပုဒ်အသစ်ပါ ၀ င်သည်။
အချို့ realtek wifi ဘုတ်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့။
Debian လုံခြုံရေး repo ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်ထားသည်။
ထို့အပြင် ISOs နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါတို့ကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
ISOs XFCE ဖြစ်သည်XFCE ပက်ကေ့ဂျ်များကိုနောက်ဆုံး bug fixes အဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ Thunar Samba share plugin ကိုထည့်ပြီး Docklike plugin ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
ISO KDE / Plasmainstall လုပ်နေစဉ်၊ "Desktop အပြောင်းအလဲများသို့ Save" ကိုသုံးသောအခါ Dolphin File Manager သည်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတော့သေချာတယ် တစ်လ (သို့) အနည်းငယ်ပိုကြာသည် ငါတို့သည်သေချာပြီးတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းကိုခံစားလိမ့်မည် "MX-21".
အတိုချုပ်အားဖြင့် developer များ "MX-21" တွင်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ပါ စံပြ ISO ၎င်းသည်ထိုက်တန်သောဆက်ခံသူဖြစ်နိုင်သည် MX Linux ဖြန့်ချိရေး saga ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၎င်းသည် GNU / Linux Distro ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးနေခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားတန်ဖိုး၊ အသုံးဝင်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုများစွာပေးသောကြောင့်၎င်းကိုငါအလွန်အမင်းအကြံပြုသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » MX -21 Beta 2: MX Linux 21 ၏ဗားရှင်းအသစ် - Flor Silvestre
Roger hartig ဟုသူကပြောသည်
mate geht nicht auf mx linux 21 beta2ကို install လုပ်ပါ။ Master PDF Editor packet nicht gefunden, hoffe das es zur finale version auch funktioniert, diesen fehler muß noch behoben werden, damit ich in der finalen version auch den mate desktop benutzen kann ။
Roger Hartig ကိုပြန်ပြောပါ
Grüße၊ Roger Und vielen Dank für Ihren Kommentar und dafür, dass Sie uns von Ihren Erfahrungen berichtet haben ။
Chrome 93 ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်